မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း လက်ရှိ အခြေအနေ(သတင်း ဓာတ်ပုံများ..). ~ ဒီမိုဝေယံ
မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း လက်ရှိ အခြေအနေ(သတင်း ဓာတ်ပုံများ..).
၂၀၁၁ခုနှစ် ဇူလိုင်က မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းမှ မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံတွေပါ...။ စီမံကိန်း ဧရိယာနဲ့ ဝန်ထမ်းအဆောက်အဦး ပုံတွေပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်မှ တောင်ကတုံးများ အခြေအနေ
လက်ရှိ မြစ်ဆုံဆည် သတင်း၊ ဓာတ်ပုံများ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်... ယာဉ်မောင်း၊ ထမင်းချက်အဆုံး မြန်မာတယောက်မှ မရှိပါ...။ ဟန်ပြမြန်မာစာတမ်းများသာ ရေးထိုးတာဖြစ်ပါတယ်...